WAR CUSUB: Laba Kamida Xiddigaha Man United Oo Gacan Iskula Tagay Tababarka Dhexdiisa & Jawiga Old Trafford Oo Faraha Kasii Baxay - Laacib
HomeWararka CiyaarahaWAR CUSUB: Laba Kamida Xiddigaha Man United Oo Gacan Iskula Tagay Tababarka Dhexdiisa & Jawiga Old Trafford Oo Faraha Kasii Baxay
WAR CUSUB: Laba Kamida Xiddigaha Man United Oo Gacan Iskula Tagay Tababarka Dhexdiisa & Jawiga Old Trafford Oo Faraha Kasii Baxay
Laba kamida xiddigaha kooxda Manchester United ayay warar dhawaan soo baxay sheegayaan inay si toos ah ugu dhex dagaalameen xerada tababarka kooxda taas oo sii xumaynaysa xilli ciyaareedka markii horeba fashilka ahaa ee Red Devils.
Sida uu sheegayo wargeyska The Sun, labada xiddig ee isku dhacay oo aan la magacaabin ayaa ku dagaalamay tababarkii ugu horreeyay ee ay xiddigaha kooxdu kusoo laabteen tan iyo markii ay guuldarrada 4-0 ka ah ee bahdilka ahayd kala soo kulmeen Brighton.
Tababaraha kumeel gaadhka ah ee kooxdaas ee Ralf Rangnick ayay warbixintu sheegaysaa inuu arkayay isku dhaca ciyaartoydaas isla markaana uu fasax kale oo dheeri ah siiyay dhammaan xiddigaha kooxda.
The Sun ayaa sheegaya in waxa sababay isku dhaca labadaas xiddig uu yahay uun xilli ciyaareedka liita ee ay Man United qaadanayso iyo xidhiidhka wanaagsan ee aan ka dhaxayn dhammaan shaqsiyaadka kooxda ku sugan.
Man United ayaa saddex kamida shantii kulan ee ugu dambeeyay ee ay soo ciyaartay guuldarro lasoo kulantay waxaana kasoo adkaaday Liverpool, Arsenal iyo Brighton.
Arrinta xilli ciyaareedka Red Devils fadeexada dhammayska tiran u horseedi karta ayaa ah in haddii West Ham United oo booska toddobaad joogtaa ay afar dhibcood ka keensado labada kulan ee u hadhay ay United xilli ciyaareedka dambe ka ciyaari doonto UEFA Confrence League.
Tababaraha kusoo wajahan Manchester ee Erik Ten Hag ayay hortaagan yihiin caqabado badan oo dhinacyo kala duwan ah oo ay tahay inuu xal ka keeno marka uu kooxdaas qabto xagaaga.